छोराछोरीको लागि १ बाबुको संघर्ष, स्कुल पठाउन प्लास्टिकमा राखेर यसरी नदि पार गराउछन ! (भिडियो सहित)
यो घटना भियतनामको हो। सिसापाकेलीले यी तस्विरहरू अनलाइनमा साझेदारी गरेका छन्, जसले बच्चाहरूलाई ठूलो प्लास्टिकको थैलोमा राखेर नदी पार गराएको दृश्य टेलिभिजनमा देखाउँछन् र २० मिटर चौडा नदीको वारिबाट पारी उनीहरूलाई संतोषजनक अवस्थामा स्कूलमा पुग्न मद्दत पुर्याउँछन्।
दुख शब्द को परिभाषा मानिस हरु पिच्छे फरक फरक पाइन्छ किन कि यो मानिस हरु को नितान्त ब्येक्तिगत सोच हो । धेरै मानिस हरु ले दुख लाई सन्तुष्टि संग दाजे र परिभाषित गर्दछन उनिहरु का अनुसार मानिसहरु जब आफ्नो चाहना हरु पुरा गर्न सक्दैनन् तब उसले दुख महसुस गर्ने गर्दछन । यस संसारमा धेरै ंकेटाकेटीहरू छन् जुन कुनै उचित सुविधाहरू नभएकै कारण शिक्षा पाउन सक्दैनन्। यो एक त्यस्तै कथा हो जहाँ...
यो हप्ताको *मुन्द्रेको कमेडी क्लवमा निकै रमाइलो भएको छ । पछिल्लो समय *मुन्द्रेको कमेडी निकै चर्चामा रहेको छ । हास्यास्पद र नयाँ नयाँ सेलिब्रेटीहरुको आगमनले मुन्द्रेको कमेडी क्लब हेर्न लायक बनेको छ । दिपा श्री प्रमुख अतिथिको रुपमा रहने यश कार्यक्रम जितु नेपाल “मुन्द्रेले” चलाउछन । यस कार्यक्रमका मुख्य आकर्षक फुलन्देकी आमा, अकबरी, लट्टे हुन उनिहरुले पाहुनाका रुपमा आएका सेलिब्रेटी...
चर्चित नायक पल शाह मर्डन कलेजमा पुग्दा फ्यानहरुले हानथाप गरिरहेका देखिए । पल शाहका धेरै फ्यान फलोअर्स छन । यस्तो क्रेज मर्डन कलेजमा यस्तो देखियो कि कतिपय केटि फ्यानहरुले उनलाई छोड्नै मानेनन । पछिल्लो समय नेपाली सिने नगरीमा चर्चा पाइरहेको नाम हो –पल शाह । *पललाई म्युजिक भिडियोको स्टारको रुपमा लिने गरिन्छ । एक समय हरेक जसो म्युजिक भिडियोमा पललाई देख्न सकिन्थ्यो । तर पछिल्लो समय...
काठमाडौ - पाँच महिनाको लकडाउनको समयमा वुहानका २६ वर्षीय झाउको १ सय १ किलो तौल बढेको छ । साइबर क्याफेमा काम गर्ने झाउको तौल डिसेम्बरमा १७७ किलो थियो । लकडाउनका क्रममा पछिल्लो पाँच महिनामा उनको तौल १ सय १ किलोले बढेर २ सय ७८ किलो पुग्यो...
काठमाडौं - फ्रान्समा मोरिस नाम गरेको कुखुराको भालेको मृत्यु भएको छ । बिहानको समयमा बासेको भन्दै आफ्नो मालिकलाई अदालत पुर्‍याइएपछि चर्चामा आएको मोरिसको...
बिबिसी-पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तको जिल्ला घोटामीको स्थानीय अदालतले पुलिस हिरासतमा एक भालेलाई रिहा गर्ने र त्यसको मालिकलाई हस्तान्तरण गर्ने आदेश दिएको...
"लकडाउनका बेला घरका लागि तरकारी र खाद्यवस्तु लिन निस्किएका एक व्यक्तिले फर्किंदा विवाह गरेर दुलही लिएर आएका छन् । उत्तर प्रदेशको एक गाउँमा लकडाउनमा बेलामा...
१५ असारमा डा. बाबुराम भट्टराईले यसरी रोपाई गरे ! [हेर्नुहोस १० तस्बिर]
विषादी प्रयोग गरी पकाइएको भारतिय आँप बजारमा, स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले हानिकारक !
किसानको कोटामा चिन जादै कृषि मन्त्री
ए.सी / फ्रिज
वृद्ध आश्रमबाट छोरालाई आमाको चिट्ठी
हास्य ब्यंग्य श्रृंखला ‘कुरा मात्र भो’ शनिबार ८: ३० मा एनटिभी प्लसबाट प्रसारण हुने !
यो हप्ताको मुन्द्रेको कमेडी क्लवमा “आपको” जोडी ! [हेर्नुहोस ट्रेलर भिडियो]
थामिएन कसैको आँशु सात कक्षामा पढ्ने बालकको भाषणले हलभरिका सबै मानिस रुवाबासी ! (भिडियो)
रमेश प्रसाइले भने “लेलाे नागरिकता लेलो भन्दै भारतीयहरु नागरिकता लिन आउछन” (भिडियो)
‘सारेगमप’मा तेस्रो भएर फर्किएका प्रितम आचार्यलाई झापामा भव्य सम्मान ! [भिडियो सहित]
लालुमै गीतमा सुष्मा खनालको दमदार कभर डान्स (भिडियो)
अमेरिकामा प्रदर्शन : प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप हुँदा दर्जन प्रदर्शनकारीको मृत्यु !
छोटो कपडाले ट्रोलको सिकार बनिन् अमिसा !
युक्रेनमा चोरहरुको समूहले एक प्रहरीलाई बन्धक बनाएपछी !
वर्ल्ड टच टुर्स एण्ड ट्राभल्स प्रालिमा नयाँ ब्यवस्थापन
जापानको प्रशिद्ध परिकार रामेनको स्वाद अब नेपालमा